Plugins amin'ny ati-doha: Plugins hampitomboana ny famokarana | Avy amin'ny Linux
Plugins amin'ny atidoha: Plugins hampitomboana ny famokarana
manaraka Lahatsoratra 2 teo aloha amin'ny App atidoha, izay ifantohana manatsara ny famokarana amin'ireo mpampiasa amin'ny solosain-dry zareo, hijanona amin'ity fahatelo ity isika boky hampahafantatra bebe kokoa ny fahafaha-manaony amin'ny alàlan'ny fampiasana ny plugins tsara indrindra napetraka ary misy ao.
Ilaina ny mahatadidy sy manantitrantitra fa na dia ny App atidoha ianao 2 taona tsy misy fanavaozana, mamela ireo izay manana fahalalana ilaina, mamorona plugins anao manokana ary zarao amin'ny vondrom-piarahamonina mba hanohizana ny fampitomboana ny fahafahan'ny fampiharana.
Androany, araka ny fizarana ao amin'ny Plugins de Tranonkala ofisialin'i Cerebro ao amin'ny GitHub Misy ireto plugins manaraka ireto ho an'ny fampiasana manokana sy ny fampiasana ankapobeny:
1 Fitaovana fampiasana manokana
1.1 Natokana ho an'ny rafitra fiasa MacOS
1.2 Manokana amin'ny Windows Operating System
1.3 Manokana amin'ny Linux Operating System
2 Plugins amin'ny tanjona kendrena ankapobeny
3 Fanampin'ny ati-doha
Fitaovana fampiasana manokana
Natokana ho an'ny rafitra fiasa MacOS
fifandraisana amin'ny ati-osx: Ampiasaina hamela ny fitantanana fampahalalana momba ny fampiharana fifandraisana OS
mamaritra ny ati-osx: Ampiasaina hamela ny fitantanana vaovao momba ny fampiharana rakibolana OS
atidoha-osx-eject: Ampiasaina hitantanana haingana ny volan'ny OS
rafitra ati-osx: Ampiasaina hitantanana ny mandeha ho azy ny fampiasa sasany amin'ny rafitry ny OS
atidoha-iterm: Natao hanatrarana ny fampiharana ny baikon'ny Shell avy amin'ny tsipika fikarohana, toy ny hoe avy amin'ny fampiharana terminal (console) an'ny OS
Manokana amin'ny Windows Operating System
atidoha-dia-zava-drehetra plugin: Ampiasaina hamela ny fikarohana data sy fampahalalana amin'ny alàlan'ny fampiharana rehetra avy amin'ny Voidtools. Ny zava-drehetra dia fitaovana fikarohana ao amin'ny birao ho an'ny Windows izay afaka mahita rakitra sy lahatahiry amin'ny anarany haingana.
rafitra atidoha-windows-windows: Ampiasaina hitantanana ny mandeha ho azy ny fampiasa sasany amin'ny rafitry ny OS
atidoha-varavarankely: Natao hanatrarana ny fampiharana ny baikon'ny Shell avy amin'ny tsipika fikarohana, toy ny hoe teo amin'ny fampiharana terminal (console) an'ny OS
Manokana amin'ny Linux Operating System
rafitry ny linux-linux: Ampiasaina hitantanana ny mandeha ho azy ny fampiasa sasany amin'ny rafitry ny OS
ati-varavarankely-mpitantana: Nampiasaina lisitra ny fikandrana fisokafan'ny rindrambaiko misokatra ary mametraka azy ireo eo alohaloha na manidy azy ireo.
Ati-doha: fampiharana Open Cross-Platform ho an'ny famokarana
Famokarana hatramin'ny farany ambony: Ahoana ny fampiasana ny rindranasa Brain amin'ny lalina?
Plugins amin'ny tanjona kendrena ankapobeny
Ireo no anaran'ireo kojakoja ofisialy ho an'ny fampiasana ankapobeny na manerantany, izany hoe, azo ampiasaina amin'ny OS napetraka izy ireo:
lalana manamboatra ati-doha
mamaritra ny ati-doha
Araka ny hitanao, misy maro ary saika ny rehetra samy manana ny fiasan'izy ireo. Na izany aza, ho an'ireo mpampiasa tsy manome azy ireo ny App atidoha momba azy ireo GNU / Distros Linux na tsy tian'izy ireo fotsiny, misy ny safidy tsara sy tsotra toa ny varahina y Albert.
Toy ny amin'izao fotoana izao, mampiasa ny App atidoha momba ahy GNU / Linux Distro, tsy misy olana, noho izany, dia mamporisika anao hampiasa ankoatran'ny plugins manokana 2 ho an'ny "Linux" (rafitry ny linux-linux y manager-window-window-manager), ny add-on 10 voalaza etsy ambany ho an'ny fampiasana manaraka, ny sasany izay efa napetraka par default:
Google: Mikaroka ny tranonkala amin'ny tranokala izay namboarina ho lasa default.
Files Nav: Mba hahazoana topi-maso ny fisie aseho rehefa mizaha ireo lalan'ny OS
Mpanova: Manatanteraka fiovam-po fandrefesana singa sy vola (vola) ary asa matematika tsotra.
Manokatra tranonkala: Mba hijerena ireo URL voatonta. Miankina amin'ny tranonkala nozahana, ny kisary (favicon / logo) an'io dia azo entina na tsia.
Fikarohana rakitra: Hizaha ny rafitry ny rakitra ao amin'ny bara fikarohana.
translate: Mitondra fandikan-teny avy amin'ny fiteny samihafa amin'ny teny anglisy avy amin'ny bara fikarohana.
Shell: Mampihatra ny kaomandy amin'ny làlan-kizorany tanteraka izay manomboka rindrambaiko na baiko amin'ny terminal, sady tsotra no be pitsiny, izay mahatonga azy io ho fitsapana ny baikon'ny Shell Scripting avy amin'ny Desktop.
IP: Mba hijerena ireo adiresin'ny tamba-jotra voalamina ao amin'ny interface interface amin'ny zotram-pikarohana.
Win: Mba hampisehoana mialoha ny fikandrana manokana momba ny rindranasa mihazakazaka ankehitriny.
Cryptocurrency: Mba hampisehoana an-tsary ny lanja sy ny fitovian'ny maro amin'ireo vola crypto ankehitriny an'ny Blockchain Ecosystem.
Raha fintinina, araka ny hitanao dia misy plugins ilaina maro hafa azo ampiasaina izany, fa ny sasany mety tsy mandeha mahafapo amin'ny a Ny Desktop Environment na ny GNU / Linux Distro dia mamaritra. Na izany aza, misy ny plugin antsoina hoe «Mpanamboatra baiko"izay manome fahafaha-manao mamorona fiasa manokana, toy ny kaomandy baiko default manao asa iray, izay manome ny manovaova be ny fampiharana.
Manantena izahay fa ity no fahatelo sy farany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Cerebro», manamafy fa tsy isalasalana fa mahaliana sy miasa io loharanom-baovao misokatra sy fampiharana hazo fijaliana, tena ilaina tokoa hanatsarana ny vokatra eo amin'ny latabatr'ireo solosaintsika; ary noho izany, mahereza fahalianana sy fampiasana, Ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Plugins amin'ny atidoha: Plugins hampitomboana ny famokarana
SpaceX: mitondra astronauts ho any amin'ny habakabaka amin'ny alàlan'ny Linux
PeerTube 2.2 dia miaraka amin'ny fanatsarana mba hanafarana raki-peo, fampakaram-peo, fampifandraisana ny mpampiasa ary maro hafa